Maitiro Ekuwedzeredza Rako Rekodhi - Yenyika Yese Yekuwedzera Vhiki
Kuwedzeredza rekodhi yako inzira yekuparadza rekodhi yako kuti irege kutaridzika kune vashandirwi kana kutevedzwa kwemutemo. Svondo reNyika reExpungement uri Gunyana 19 - 26! Alex Boutros naMo Will kubva Cannabis Equity Illinois Joinha kuti titaure nezvekutongwa kwematare edzimhosva uye titore isu nenzira yekudzingwa.
Tarisa chikamu paYouTube kana teerera iyo podcast yakanzi Maitiro Ekuwedzeredza Rako Rekodhi - National Expungement Vhiki neCannabis Equity Illinois Coalition paSpotify, Google Play, kana chero kwaunoteerera podcast!
RELATED POST: Illinois Cannabis Kuwedzeredzwa
RELATED POST: Chiitiko CHAKAWANDA
Q&A neCannabis Equity Illinois
Chii chinonzi Cannabis Equity Illinois?
Cannabis Equity Illinois Mubatanidzwa: Cannabis Equity IL Mubatanidzwa ndeye uswa isingabatsiri yenhengo dzemunharaunda dzinorwira kuve nechokwadi chekuti kubvumidzwa kwecannabis kunoitwa kugadzirisa uye kudzoreredza munharaunda dzakakanganiswa zvakanyanya nehondo yemishonga. Takatanga gore rapfuura pakati pekunyoreswa pamutemo pakange paine kufona kubva kunhengo dzemunharaunda Nokutendeka mu cannabis uye kudiwa kwenzvimbo yakarongeka.
Nderudzii rwezvirambidzo zvinotarisana neavo vane zvinyorwa zvematsotsi?
Zvinoenderana nenzvimbo yekufambira mberi kweAmerica, vanhu vanobatanidzwa muhurongwa hweAmerica hwepamutemo vanogona kutarisana nezvirango zvinopfuura makumi mana nezvina zvemitemo zvinogona kuvatadzisa kuwana basa, kuwana marezinesi, kuwana uye kuchengeta dzimba, kukodzera rubatsiro rweveruzhinji, kutsvaka yepamusorosoro dzidzo, kutora chikamu mukutora chikamu kwevanhu, kuchinja chinzvimbo chekutamira, kugamuchira kodzero yemwana, uye ndizvo kwete chinhu chose, mu Illinois, ipapo zviri pedyo Mitemo 1,189 yakasarudzika yekusingaperi. - Cannabis Equity Illinois Mubatanidzwa
Unogona kuvhota uine chinyorwa chematsotsi?
Ehe! MuIllinois, iyo chete nguva kodzero yako yekuvhota yabviswa ipo paunenge uchishandira kugutsikana mukati mekururamisa inisitichusheni, iyi kuverenga furlough futi. Ukangosunungurwa, dzako kodzero yekuvhota yaburitswa. Zvisinei, izvi hazvisizvo mune dzimwe nyika. - Cannabis Equity Illinois Mubatanidzwa
Kupararira kazhinji zvinoreva kuti rekodhi yaparadzwa, uye haizi kufambidzana kune vashandirwi kana kutevedzwa kwemutemo (kunze yeiyo FBI uye yekupinda). Zvisinei, mitemo Zvinosiyana nyika-kusvika-nyika. - Cannabis Equity Illinois Mubatanidzwa
Ndeupi musiyano uripo pakati pekudzingwa, kugumbuka, nekuisa chisimbiso rekodhi rematsotsi?
Sezvambotaurwa, kudzingwa kunofungidzirwa kuparadza chinyorwa asi kuiswa chisimbiso kunowanikwa kune vanoita zvemitemo uye kune vamwe vashandirwi uye zvehurumende masangano, senge kana iwe ukanyorera kudunhu repaki kana kushanda muchikoro. Kuzvidzivirira inzira inowanzo shandiswa nevanhu vakasungwa kuti vadzokerezve mutongo wavakambopa kuti vawane mutongo wakadzikira. - Cannabis Equity Illinois Mubatanidzwa
Zvinoita here kuburitsa rekodhi yako pasina gweta?
Ehe! Zvinhu zvakawanda zvinogoneka pasina gweta uye yaizodaidzwa "Pro se". Nekudaro, mapepa epamutemo uye legalization zvinogona kuomera munhu wezuva-rekufamba, saka tinobatana naye Yekubatsira Kwemutemo Chicago, anoita zvinoshamisa zvizere chimiro kubatsira vanhu kuti rekodhi yavo ibudiswe kana kuiswa chisimbiso. - Cannabis Equity Illinois Mubatanidzwa
Zvinowanzoita marii kubvisa rekodhi rako?
Mu Cook County, iwe unofanirwa kutanga watora RAP jira rako, inova madhora gumi nematanhatu uye jira reRAP yevana mahara. Ipapo iwe unofanirwa kufaira iyo expungement mapepa ayo ari $ 9 pamhosva imwe neimwe. Nekudaro, iwe unogona kugara uchikumbira mubhadharo waiver. - Cannabis Equity Illinois Mubatanidzwa
Iwe unogona here kutifambisa kuburikidza nehurongwa hwekuburitsa rekodhi yako?
Mu Cook County, kutanga, unofanirwa kuenda kumuzinda we CPD uye utore zvigunwe, izvo mari $ 16, uye kumbira wako wechidiki zvakare iyo yemahara. Zvino panguva denda, vanozokutumira kwauri, kubva ipapo unogona kuzadza nekufaira iyo expungement mapepa uye ubhadhare muripo. Kuti uwane mamwe madanho nhanho, ndapota yedu kana Legal Aid Chicago's FB peji kuti titarise yedu "how to expunge" webinar. Iwe unogona kutumira email zvakananga pikicha yemarekodhi ako ku criminalrecords@legalaidchicago.org kana kufonera 312.229.6071. Tiri kutanga expungement maawa emahofisi kuenderera neRAP yedu mapepa mazuva uye expungement rubatsiro. - Cannabis Equity Illinois Mubatanidzwa
Chii chinoita kuti mumwe munhu akodzere kuti marekodhi avo aburitswe?
MuIllinois, matatu chete emhando dzematambudziko haakwanise kubviswa kana kuvharirwa izvo zvinosanganisira kutyorwa kwemigwagwa kudiki, maDUI, Kusungwa kweBattery, Kutyorwa kweOrodha maProtectins, kutongwa kwepabonde (kunze kwechipfambi kana kusazvibata kwevanhu), kana Mhosva dzeMhuka. Kune vechidiki, zvese asi iko kuwanikwa kwekutadza kwekutanga-degree kuponda uye zvekuita zvepabonde zvinoda kunyoreswa. - Cannabis Equity Illinois Mubatanidzwa
Illinois yakaita misoro ye kuburitsa 700,000 zvinyorwa pamwe nekunyoreswa zviri pamutemo. Kune chero mamwe matunhu ane matanho ekudzima akasungirirwa pamutemo wavo wepamutemo seizvi?
California yakaita, uye ivo vakatendera kuti otomatiki kufutisa ku. Hurumende inofungidzira vanhu vangangosvika mazana maviri ezviuru vachabvisirwa zvinyorwa zvavo nekuda kweichi chiitiko. Illinois inoda kufambira mberi pane expungement tho. Kubviswa kwecannabis pamhosva dzese, Kudzingwa otomatiki zvakanyanya sezvinobvira, e-Kufaira, uye zviwanikwa zvekucheka pakubika kwegore redunhu + nguva yekumirira. - Cannabis Equity Illinois Mubatanidzwa
Iko cannabis kunyoreswa zviri pamutemo inodzora kutonga kwematsotsi?
Zvechokwadi kwete. Tinofanira kurwa zvakanyanya kuti tisvike padyo nezvatinoda. - Cannabis Equity Illinois Mubatanidzwa
Iwe unofunga kuti zvinokwanisika kune avo vakarambidzwa kubva pamikana yebasa nekuda kwerekhodi ravo kuti vagamuchire kudzoserwa kwemukana webasa wakarasika?
Izvo zvinotyisa. Uye chimwe chinhu chataigona kurwira. - Cannabis Equity Illinois Mubatanidzwa
Svondo reNyika reExpungement
Maitiro Ekuwedzeredza Rako Rako neNational Expungement Vhiki
Expunge rekodhi rako neNational Expungement vhiki. Iyo National Expungement Vhiki, yakatangwa muna 2018 uye ikozvino chiitiko chegore negore. Inopa kuburitswa, post-kutongwa mabasa erubatsiro, uye mazhinji mamwe mabasa ehukama nerutsigiro, munyika yese.
Basa ravo, iro risingagumirwe necannabis, rinovavarira kupa simba nharaunda kugadzirisa, kuchengetedza, kurarama, uye kugadzira mukutsvaga kuenzana. Uye, inofambiswa nevanhu vane ruvara, NEW yakagadzira nharaunda yevakazvipira vanhu vanoshanda sevarongi nevamiriri.
Boka rakaburitsawo a 2019 Impact Chirevo inoongorora yekupedzisira yekudonha mushandirapamwe inoisa 652, kusanganisira kunyoreswa kwevavhoti, kwevanopfuura zviuru zvitatu.
Nei Svondo reNyika reExpungement Rinokosha Zvakadai?
Kubvisa rekodhi yako kutora danho rekutanga mukuwana mukana wekuwana dzimba, dzidzo, uye mamwe masevhisi ayo asingawanzo kuwanikwa kune vane kutenda. National Expungement Vhiki mukana wevaAmerican kutenderera nyika kuti vadzore chimwe chinhu chakatorwa kubva kwavari muzita rehondo yemishonga.
Uku kufamba kwakadzika kubvisa uye / kana kusimbisa mvumo yakakodzera yekubatsira kusimudzira hupenyu hwemapoka anogara akasarudzika emaAmerican nekuvaisa munzira yekuregererwa zviri pamutemo, nekupa rubatsiro munharaunda nemunharaunda.
Kunyangwe zvidzidzo zvichiratidza maAmerican kubva kumarudzi ese kushandisa cannabis zvakaenzana, iyo hondo yezvinodhaka yanga ichinyanya kuomarara kumapoka mashoma uye nharaunda dzinowana mari shoma, semuenzaniso, maAfrica-maAmerican vanenge kaviri vangango sungwa nekuda kwekutyorwa kwe cannabis uye vamwe vanhu - kunyanya vashoma-, kubva nhasi, variko kushandira hupenyu mutirongo kune chimwe chinhu chakanyoreswa zviri pamutemo mune chimwe chimiro mumatunhu makumi matatu nematatu kubva makumi mashanu muUnited States.
Vanhu vane kutenda kwezvinodhaka vanogona kuva nenguva yakaoma mumazuva mazhinji ezuva nezuva ehupenyu hwavo, sekutsvaga pekugara, kuwana basa, kana kunyorera mari yekoreji. Kusanganiswa kwekunyadziswa uye nemitemo yenyika dzakasiyana dzinovatadzisa kutora chikamu sevanhuwo zvavo uye zvinoderedza mikana yavo yekugamuchira rubatsiro rweveruzhinji.
Kunyangwe yavo nzira yebasa ishoma sezvo paine Kupfuura 15,000 zvepamutemo uye zvemitemo muUnited States zvinodzikamisa marezinesi ekushanda kune avo vane mhosva yekutongwa. Izvi zvinoreva kuti vanhu vane mhosva yekushandisa zvinodhaka vanogona kunge vasina kukodzera kupihwa marezinesi ehurumende anodikanwa kuti vadzidzise munzvimbo dzavanosarudza mune mamwe matunhu (sevatengesi, cosmetologists, kana vanachiremba)
Muna 2018, 92% ye 663,367 vanhu vakasungwa Zvembanje zvakapihwa mhosva yekungove nehunhu, kunyangwe hazvo kuti vangangoita makumi matatu muzana yevanhu vakuru munyika ino vanogara mumatunhu ane vanhu vakuru zviri pamutemo. Muna 30, iyo kusungwa kwekuwanikwa necannabis dzaive dzakakwirira kudarika kusungwa pamhosva dzese dzemhirizhonga Pamwe chete. Uye iwe ungangodaro uchishamisika zvikuru kunzwa kuti iwo manhamba aive akatonyanya kushata makore apfuura.
Nezvipingamupinyi izvi zvese zvinotarisana nevazhinji vekuAmerican, kufamba kuenda tsvaga zvinyorwa zvecannabis iri kukura nekukurumidza uye inorumbidzwa zvikuru. Kana iwe uchifarira kudzidza zvakawanda nezvebasa ravo usarasikirwa nechikamu chedu cheCannabis Legalization Nhau yakatsaurirwa kune ino fambiro.
National Expungement Vhiki Nguva
Iyi kufamba ine manhamba asinganzwisisike emakore mashoma akamboshandiswa:
Muna 2018, vakabatsira vanhu makumi maviri nevasere kutanga chirongwa chekujekesa nekuva nezviitiko gumi nemasere mumaguta gumi nemashanu
Mu2019, NEW yakabatsira vanhu mazana matanhatu nemakumi mashanu nemaviri kutanga rekodhi yekujekesa maitiro. Huwandu hwevanhu vakagamuchira mamwe masevhisi senge kunyoreswa kwevavhoti, rutsigiro rwemabasa uye kuongororwa kwehutano hwaive vanhu mazana matatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe.
Zvakare, varongi vakafungidzira kuti iko kuyedza kwakaburitsa ruzhinji kubatsirwa kwe $ 7,143,964, muchimiro chemubhadharo wakawedzerwa, yakaderedza mari yeruzhinji uye mamwe mabhenefiti mukati memakore maviri anotevera. Gore rakapera ivo vakatora zviitiko makumi mana nemana mumaguta anopfuura makumi matatu. Her iwe unogona kuvaona avo 2019 Impact Chirevo
Kune 2020, iyo hype haina kuderera. A vhidhiyo yemushamarari mutambi Seth Rogen kusimudzira kufamba kwacho kunogona kunge kwakabatsirawo vateereri vatsva kuwana ZVITSVA. "Ticharamba tichirwira shanduko idzo tichipa nharaunda dzakanangana neruramisiro," akadaro Torie Marshall, director weCage-Free Repair, mumwe wevarongi.
Chii chinonzi Expungement?
Kudzingwa inzira iyo iyo nhoroondo yematsotsi "yakasimbiswa", zvichireva kuti yakabviswa kuruzhinji. Sezvo zvichinyatso kuzivikanwa mhedzisiro inotyisa kuve nerekhodi yematsotsi inogona kumiririra iwe:
Dambudziko rekubhadharwa, kurasikirwa nebasa rako kana kusaenderera mberi pabasa rako;
Zvakaipira kukakavara kwekuchengeta mwana
Nyaya dzekupinda munyika
Dambudziko rekuhaya chivakwa
Kuramba kwemakoreji uye rubatsiro rwevadzidzi
Mitengo yepamusoro yeinishuwarenzi
Kurasikirwa kwekodzero yekuvhota
Kubviswa kwerezinesi rehunyanzvi
Saka kunyangwe hazvo kudzingwa kuchinzwika seimwe yeaya anodakadza mazwi magweta anoshandisa, zvinogona chaizvo kuchinja hupenyu hwako kuti huve nani.
Ndeapi Maitiro Ekutora Rako Rako Kuwedzeredzwa
Kukumbira kuburitsa rekodhi yako kuri nyore nechikwata asi iwe unogona chaizvo kuzviita iwe pachako. Kazhinji, nzira yekudzingwa pachayo inotanga nekuzadza chikumbiro kana kugadzirira chikumbiro kukumbira kubviswa, kupa magwaro anodiwa, uye kuendesa chikumbiro kudare rinokwanisa rematsotsi kuti mutongi aongorore uye mutongo.
Maitiro acho anogona kuwedzera kuomarara zvichibva pamatongerwo enyika dzinoti, saka tinokukurudzira kuti uwane rubatsiro kubva kugweta rine ruzivo kuitira kuti uve nemukana uri nani wekubvumidzwa.
Marii yaizodhura kuti rekodhi rangu ribudiswe?
Kuti ubudise rekodhi yako mutengo unogona kusiyana. Kufaira nedare redzimhosva zvinowanzotangira pamadhora gumi kusvika pamadhora mazana mana asi, chokwadi, zvinoenderana nenyaya nemamiriro enyika. Iwe unofanirwa kutsvaga zvaunogona kuita uye uchifunga mupfungwa dzako kuti iwe une rutsigiro rweakakura asingabatsiri senge National Expungement Vhiki murongi uyo anoda kukupa ruoko, usazeze kusvika kwavari.
Chii chandingaite kutsigira National Expungement Vhiki?
Cage-Yemahara Cannabis yakatangwa, mushandirapamwe wekutsvaga mari yeNEW kubatsira kubvisa kana kudzikisa marekodhi emhosva dze cannabis anonzi RATIDZA RUDO RWAKO.
Iwe unogona kupa zvakananga kune iyo chikonzero. Asi zvakare, mabhizinesi anokokwa kutora chikamu mu fundraiser kuburikidza nemusika wayo wedigital. Mabhizimusi anokwanisa kutora chikamu se "Vagadziri," uye vanobatana neNational Expungement Vhiki naNyamavhuvhu 22, vachipa mugove webhenefiti yezvigadzirwa zvavo kumakiriniki evhiki e2020 ekudzimisa uye gore rese kutongwa kwematsotsi.
Cannabis Equity Illinois Mubatanidzwa
Unofarira kuuya semuenzi? Tumira email mugadziri wedu pa lauryn@cannabislegalizationnews.com.